alldayniie.com » Natural Star Nani aan u sacaba tuno madaama filimkiisa MCA noqday Super Hit weyn mudo 12-maalmood gudaheeda
Natural Star Nani aan u sacaba tuno madaama filimkiisa MCA noqday Super Hit weyn mudo 12-maalmood gudaheeda
Natural Star Nani 2017 waa sanad uusan waligiis hilmaami doonin madaama sedexdiisa filim Big Hits noqdeen sidoo kalena awoodiisa Telugu (Tollywood) sare u kacday.
Nani filimkiisa haatan tiyaatarada saaran MCA wuxuu si rasmi ah u noqday Super Hit asigoo mudo 12-maalmood kusoo xareeyay 60 Crore isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka saami ahaana waxaa laga helay 35.40 Crore.
Waxa ugu weyn kooxda cajaladaha qeybiyaan ku faani karaan ayaa ah in filimka MCA dib uga heleen 120% lacagaha ay ku iibsadeen waxaan ula jeednaa 30 Crore ayay ku iibsadeen wuxuuna dib usoo celiyay filimkaan 35.40 Crore ayadoo 5.40 Crore laga faa’iiday!
MCA suuq walbo lacagaha uu ka keenay mudo 12-maalmood sida shabakada Andhara Boxoffice soo daabacday fadlan hoos kaga bogo:
Dhulweynaha Telugu AP/Nizam wuxuu ka keenay 46.50 Crore, saami ahaana waxaa laga helay 29.72 Crore
Gobolka Karnataka wuxuu ka keenay 4.10 Crore, saami ahaana waxaa laga helay 1.61 Crore
USA Boxoffice wuxuu ka keenay 6.60 Crore, saami ahaana waxaa laga helay 2.97 Crore
Dunida inteeda kale wuxuu ka keenay 2.80 Crore, saami ahaana waxaa laga helay 1.10 Crore
Wadarta Guud lacagaha uu keenay dibad iyo dal 60 Crore, saamiga guudna waxaa laga helay 35.40 Crore
MCA wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo ee Nani kaligiis hogaamiye ka yahay marka meel la iska dhigo filimka Eega ee uu Director SS Rajamouli iska lahaa sidoo kalena Superstar Sudeep kula jiray.
Nani filimada uu 2017 sameeyay Ninnu Kori (Super Hit) wuxuu soo xareeyay 52.30 Crore halka Nenu Local (Blockbuster) uu soo xareeyay 58 Crore isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka.
Sidaa darteed MCA ayaa noqday Nani filimkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyo isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka wuxuuna ku talaabsaday wiilkaan heer sare madaama sedexdiisa filim sidoo kalena mid walbo min $1M uu gudaha USA/Boxoffice kasoo xareeyay